Xog: Laba Digniin Oo Culus Oo Ka Jirta Magaalada » Axadle Wararka Maanta
Xog: Laba digniin oo culus oo ka jirta magaalada
Muqdisho (Axadle) – Waxaa 24-kii saac ee la soo dhaafay aad u xoogeystay digniinta ka soo baxeysa xafiisyada amni ee ay hay’adaha ajnabiga ah ku leeyihiin Muqdisho, gaar ahaan xarunta Xalane iyo sirdoonka Soomaaliya, taasoo ku aadan in saacadaha soo socda ay Muqdisho ka dhici kaaraan weeraro culus.
Xogta ay bixiyeen khubarada amniga, oo ay heshay Axadle, ayaa sheegeysa in weerarada qaraxyada ah eel aga cabsi qabo ee ka koobnaan; kara rag soo xirtay jaakadaha qarxa, gaadiid qaraxyo ah iyo qaraxyada gaadiidka lagu xiro ee badanaa lagu dilo wadaha gaariga.
Sirdoonka Soomaaliya iyo kuwa ajnabiga ah ayaa sheegay in weerarada ay ka dhici karaan xarumo dowladeed, hoteelo, maqaayado iyo goobaha dadka isugu yimaadaan, sida garoomada kubadda cagta.
Sidoo kale digniinta la soo saaray ayaa waxaa qeyb ka ah in Muqdisho ay soo galeen tobaneeyo dagaalame oo ah kuwa Al-Shabaab u qaabilsan dilalka toogashada ah ee madax-jebinta loo yaqaano.
Kooxdaan ayaa la sheegay in badankood ay ku suganyihiin degmooyinka kor ka jira wadada 30-ka, waxayna ka fakirayaan sidii ay uga soo gudbi lahaayeen aagga xiran ee ka korreeya jidka Wadanaha maadaama ay wataan gaadiid isugu jira mootooyinka dhug dhugleyda iyo mooto Bajaajta, halka qaarkoodna ay gaadiid wataan sida ay xogtu sheegeyso.
Shacabka Caasimadda Muqdisho ayaa qaba cabsi badan oo dhanka ammaanka ah, halka qaarkoodna ay u arkaan cabsi gelin iyo mowduuc lagu daminayo xiisada kiiska Ikraan Tahliil.
Hay’adaha amniga ayaa xilligan aad u dayacan, ayada oo hay’adda Nabad-Sugidda ee NISA ay hareysay fadeexad ka dhalatay kiiska Ikraan Tahliil Faarax, taasi oo keentay in shaqo ka-joojin lagu sameeyey agaasimihii hay’adda Fahad Yaasiin.